SomDoc | Qalab & Dawooyin la isku Hubo
Qalab iyo daawooyin la isku hubo
I Soo Wac
My Account Username or email
La Tasho Dhaqtarka
Is Baar-Check up
Cayilka Joojinta sigaarka Bidaarta Fitamiinada HIV Test Fitamiin D Test FOBT Test DNA Test Medicine For Somalia Champix
Champix waxaa la qaataa 2 jeer maalintii 12 isbuuc. Waxaa haboon inaad horta qabsatid maalinta aad sigaarka joojinaysid kadibna 2 isbuuc ka hor aad bilowdid daawada adigoo sigaarka cabaya si daawada ay dhiigaaga ugu ururto labadaas isbuuc. Sadexda maalmood ee hore qaado 1 kaniini oo ah 0.5mg hal mar maalintii, kadibna qaado 2 jeer 4 maalmood, kadibna jooji sigaarka adigoo ilaa 12 isbuuc sii wadaya kaniiniga.	Gado	Cudurrada & Dawooyinka
Kacsi la'aanta Bidaarta Kalaamiidiya Malaariyada Shubanka Safarka Infekshanka Kaadida Cabeebka Xubinta Galmada Xakameynta Dhalmada Cayilka Joojinta Sigaarka Cudurada Cidiyaha Fiitamiinada Baarista HIV adigoo gurigaaga jooga Laab-jeex Sanboor Goonjabka Malawadka Kacsan - IBS Hargabka Faqriga Fitamiin D Baabasiirka Gooryaanka Gurigaaga is kaga baar
Faqriga Fitamiin D
Dhiigga Il-ma-qabatada ee Saxarada
Joojinta Sigaarka Sigaarku waa balwad aad u liidata oo dhakhaatiirta iyo culumaduba isku raaceen inuusan wanaagsanayn aduun iyo aakhiraba. Wuxuu keenaa cuduro aan la soo koobi karin, wuxuu caan ku yahaya ur iyo aragti xumo, wuxuu gubaa oo tahareeyaa meelaha uu sii maro ilaa uu ka gaaro sanbabada, aakhirka wuxuu hawl-gab ka dhigi karaa sanbabada, markaas oo qofku uusan noolaan karin oksijiin la’aan, waxaana la isku wada raacay inuu nafta halaago oo uu keeno cimri degdeg. Wuxuu kaloo u daran yahay jeebka, dhibkuna wuxuu u gudbaa dadka ka ag dhow oo iyaguna la qaybsada khatarta sigaarka, gaar ahaan caruurta oo uu ku keeni karo infekshanka dhagaha iyo neef. Kala bar dadka sigaarka caba waxay u dhintaan cuduro sigaar-cabida la xiriira. Cuduradaas waa adag tahay in hal meel lagu soo koobo waxaanse ka xusi karnaa kansarada, cudurada ku dhaca sanbabada, wadnaha & xididada (gaar ahaan kuwa indhaha, maskaxda iyo lugaha), roomatismo, cimri degdeg ama asaasaq, ma dhalaysnimo ama caadada oo haweenka ka go’da iyadoon aan la gaarin da’deeda.
Carabaha waxaad si aad ah looga cabaa shiishada. Dadka caba waxay ku doodaan inay tahay khudaar aan wax dhib ah lahayn. Hase yeeshee waxaa la isku waafaqsan yahay inay ka xun tahay sigaarka. Inta goor ee ay ka xun tahay ayaa lagu mur-murmaa waxaana loo dhaxeysaa 2.5 ilaa 400. Marka qofku sigaarka iska joojiyo waxaa u baaqata lacag, bilicdii horena waa u soo noqotaa. Ragga sigaarka caba waxaa ku badan cudurka kacsi la’aanta. Dumarka aan sigaarka cabinna dhalmada dhibaato kama qabsato waxayna dhalaan ilmo caafimaad qaba. Qofka aan sigaarka cabin haragiisu waa uu ka dhallin yar yahay qofka cabba ilkihiisuna waa ay ka cad-cad yihiin.
Dadka aan sigaarka cabin si caadi ah ayey u neefsadaan mana qufac badna. Waa yar tahay in dadka aan sigaarka cabin ay ku neeftuuraan howl maalmeedka joogtada ah da’ kasta ha jireene. Joojinta sigaarka ayaa sabab u noqon karta farqiga u dhexeeya in aad si nashaad leh u noolaato marka aad gabowdo haddiiba aad gaartid iyo inaad la noolaato sanbabo hawlgabay inta noloshaada ka hartay.
Daraasadaha cilmiga waxay cadeynayaan in dadka sigaarka cabaa ay badanaaba wel-wel ku jiraan. Waxay in badan oo waqtigooda ka mid ah ka fikirayaan baahida ay u qabaan sigaarka, nafiska ay ka helaan sigaarkuna waa mid cimrigiisu gaaban yahay.
Joojinta sigaarka waxay qofka u keenta dareenka guusha iyo saxan-saxo caafimaad. Dadka sigaarka joojiya waxay badankoodu sheegeen in cunnadu ay u maacaanaatay, fir-fircoonina ay u korortay.
Haddii aad markaa dooneysid in aad noqotid qof haysta caafimaad waara iyo niyad wanaagsan ilaahay idinkiis, isla markaana ay u baaqato lacag, waa in aad sigaarka u joojisaa sida ugu dhakhsaha badan. Dhakhaatiirtayada ayaa kuu qori kara kaniinigan cusub oo waxtarkiisa la isku raacay inuu ka fiican yahay labadii nooc ee horay loo isticmaali jiray. Champix, oo la qaato 12 isbuuc waa ka sareeyaa marka loo barbardhigo daawooyinka loo qaato joojinta sigaarka sida Nikotiinka ama Bupropion. Champix wuxuu shabahaa falka nikotiinka marka uu jirka galo isla markaana wuxuu joojiyaa saamayntiisa. Taas macnaheedu waa intuu qaadanayo Champix qofku aad u tabi maayo ka maqnaanshaha sigaarka waxaana intaas u dheer xaraaradii ama jaceylkii sigaar cabiduna waa ka ba’aysaa.
Fadlan riix halkan haddii aad doonaysid inaad su'aal weydiiso dhakhtarka haddii kale hoos ka dalbo Champix
Champix Standard 1.0mg tablets (Varenicline) 28 tablets (In ku filan laba isbuuc)
Champix Standard 1.0mg tablets (Varenicline) 56 kaniini (in ku filan 4 isbuuc)
Champix Standard 1.0mg tablets (Varenicline) 112 kaniini (in ku filan 8 isbuuc)
Champix Standard 1.0mg tablets (Varenicline) 168 kaniini (in ku filan inta loo baahan yahay oo ah 12 isbuuc)
Champix 2 Week Starter Pack (Varenicline) 2 week pack 11 x 0.5mg plus 14 x 1mg tablets £40.00
Champix Low Dose 0.5mg tablets (Varenicline) 56 kaniini (in ku filan 4 isbuuc)
Champix waxaa la qaataa 2 jeer maalintii 12 isbuuc. Waxaa haboon inaad horta qabsatid maalinta aad sigaarka joojinaysid kadibna 2 isbuuc ka hor aad bilowdid daawada adigoo sigaarka cabaya si daawada ay dhiigaaga ugu ururto labadaas isbuuc. Sadexda maalmood ee hore qaado 1 kaniini oo ah 0.5mg hal mar maalintii, kadibna qaado 2 jeer 4 maalmood, kadibna jooji sigaarka adigoo ilaa 12 isbuuc sii wadaya kaniiniga.
Ku Xirnow Si aan kuugu soo dirro xog caafimaad oo bille ah, bilaash u rukumo dhambaal-wareedka
Links Faa’iido leh
Na Laso Xiriir
Su’aalo Badanaa Taagan (S.B.T.)
551 High Road, , Tottenham
N17 6SB, London, UK
Tel +44 (0) 208 808 5901 Tel +44 (0) 7534 036807 Terms & Conditions
© 2012 SomDoc all rights reserved
Haybta (Marwo/Mudane) Select...
Magaca koowaad Ku qor Magaca koowaad.
Magaca awoowaha Ku qor Magaca awoowaha.
Cinwaanka daawada lagugu soo diridoono
Ku qor Cinwaanka.
Magaalada Ku qor Magaalada.
Dalka Ku qor Dalka.
Postcode Ku qor Postcode.
Email Ku qor Email.
Hubi Email Ku qor Email.
Password / Kelmada sirtaa Ku qor Kelmada sirtaa.
Moobil 1 Ku qor Moobil.
Teleefoonka Guriga 2 Ku qor Teleefoonka Guriga.
Taariikhda Dhalashada Ku qor Taariikhda Dhalashada.
Madoonayo in E-mail xayasiisa la iisoo diro I agree the site Terms & Conditions I Forgot My Password
We’ll email you password reset instructions.
Fadlan geli telefoonkaaga si laguu soo waco.
Fadlan geli magacaaga.
Fadlan geli fariin.